eNasha.com - मटर खाएर उमार्ने मान्छे
अमेरिकाका म्यासाचुसेट राज्यका निवासी रन स्वीडन आफूलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको भन्दै अस्पताल धाइरहेका थिए तर त्यतिबेला उदेकमा परे जब डाक्टरहरुले उनलाई क्यान्सर नभई उनको फोक्सोभित्र मटरको विरुवा अंकुराउन थालेको बताए ।
के भएछ भने रनलाई मटर ज्यादै मनपर्ने तरकारी थियो । उनी त्यसलाई काँचै पनि खाने गर्दथे । एक पटक उनले खाँदै गर्दा मटरको दाना पेटको आन्द्रा वा आमाशयतिर जानुभन्दा पनि फोक्सोतिर लाग्यो । -शायद उनले मटर खाँदै गर्दा र्सर्किएर पेटतिर लाग्नुभन्दा सास तान्दा फोक्सोतिर लाग्यो होला !) अनि, मटर फोक्सोमा पुगेको केही दिनमा नै अँकुराउन थालिहाल्यो ।
रन कैयौँ महिनासम्म फोक्सो दुख्ने पीडाले छटपटिइरहे र उनलाई लाग्यो, उनलाई शायद क्यान्सर भयो होला । एक पटक खोक्दाखोक्दै मूर्च्छा नै पर्ने स्थिति भएपछि उनकी श्रीमतीले रनलाई अस्पताल लिएर गइन् ।
क्यान्सर जाँच गर्नुअघि उनलाई डाक्टरहरुले एक्सरे गर्न सुझाव दिए । त्यतिबेला थाहा भयो, वास्तवमा उनको फोक्सोमा क्यान्सर होइन बरु मटर पो अँकुराएको रहेछ ।
उनको फोक्सोमा उभ्रिएको मटर आधा इन्च बढिसकेको डाक्टरहरुले बताएका छन् । यदि समयमै उनले नजँचाएको भए मटरको यो अँकुराएको बिऊ बोट नै बन्न बेर थिएन । अहिले रन के कुरामा निश्चिन्त छन् भने कम्तीमा उनलाई क्यान्सर भएको रहेनछ !
रनको अपरेशन हालै भएको र फोक्सोबाट उम्रिएको बिरुवा निकालिएको छ ।
उनको अपरेशनलगत्तै होश आएपछि अस्पतालमा खानाको रुपमा उमालिएको मटरको सुप थियो । सुप हर्ेर्दै अमेरिकाको बोस्टनी निवासी रनले भने- "खाना देखेर शुरुमा मलाई खुबै हाँस उठ्यो तर खान डर चाहिँ लागेन ।"
अहिले उनी घरमा आराम गरिरहेका छन् भने पत्नी न्यान्सीले श्रीमान्को खुब सेवा गरिरहेकी छिन् । रनका साथीहरुले उनको स्वास्थ्यलाभका विभिन्न चिठ्ठी र ठट्टा गर्न मटरको बिऊ तथा डिब्बामा बनाइएका मटरका विभिन्न परिकारहरु पठाइरहेका छन् ।
न्यान्सीले भनिन्- "यो घटनाले एउटा शिक्षा चाहिँ दिएको छ- खाना चाहिँ मज्जैले चपाएर खानुपर्ने रहेछ !"